यस्तो देश, ५६५ डलर तलब र बस्नलाई सित्तैमा घर | || Nayarambha ||
यस्तो देश, ५६५ डलर तलब र बस्नलाई सित्तैमा घर
काठमाण्डौ । एउटा सुन्दर घर होस् अनि सुखी परिवार होस् । राम्रो जागिर होस् । आम मानिसको योभन्दा अरु चाहना के होला र ? तर आम मानिसको यी सबै ...
काठमाण्डौ । एउटा सुन्दर घर होस् अनि सुखी परिवार होस् । राम्रो जागिर होस् । आम मानिसको योभन्दा अरु चाहना के होला र ? तर आम मानिसको यी सबै चाहना पूरा गर्दै छ ग्रिस सरकारले ।
जनसंख्या बढाउनका लागि क्रेट आइल्यान्डस्थित एन्टिकेथेरा सहरमा त्यहाँको सरकारले यी यस्तै विषय समेटर नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ । एन्टिकेथेरा सहरमा बसोबास गर्ने इच्छा जाहेर गर्ने मानिसले अब सित्तैमा एउटा घर र तीन वर्षसम्म ५६५ डलर तलब पाउने नयाँ योजना ग्रिस सरकारले सार्वजनिक गरेको हो ।
२० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो सहरमा केवल २४ जना बसोबास गर्छन् । यही कारणले छिटै यो सहर मानवशून्य हुने अवस्थामा आउन सक्ने खतरा बढ्दै गएको छ । त्यसैले ग्रिस सरकारले यो खतरालाई टार्न यस्तो योजना सार्वजनिक गरेको हो । एन्टिकेथेरा सहर सफा पानी र ठूलठूला चट्टानाका लागि प्रख्यात छ । यो सहरमा पर्यटक धेरै आउँछन् ।
सरकारकाे यो योजनालाई केही मानिसले मन पराएका छन् । त्यसैले हालसम्म ४ परिवारले त्यहाँ बसोबास गर्न आवेदन दिएका छन् ।
|| Nayarambha ||: यस्तो देश, ५६५ डलर तलब र बस्नलाई सित्तैमा घर